Yusuf Garaad: Muqdisho sidaan Waad ka dhigi Kartaan
Saaka markii aan toosay waan kallahay. Waxaan maray mid ka mid ah waddooyinka laamiga ah oo uu Turkigu ka dhisay caasimadda Soomaaliya.
Waxaan tegey Terminalka cusub ee gegida daayaradaha ee Aden Cabdulle oo isagana uu Turkigu dhisay. Waa terminal yar laakiin qurxoon. Nafis ayaad dareemeysa maaddaama saqafkiisu uu aad u sarreeyo, ifitiin wanaagsan aad haysato dibaddana aad arkeyso.
Miraayado ayuu ka sameysan yahay intiisa badan. Amniga, habsamida iyo nadaafadda waxaa si wanaagsan u dhowra ciidammada booliiska iyo kuwa kale ee amniga iyo hey’adda maamulka Airporka.
Waxaan iibsaday tikid dayaaradeed. Waxaan halkaa ka raacay dayaarad ah nooca Air Bus 321 – 200 oo ay leedahay Turkish Airlines oo ah sharikadda keliya ee caalamiga ah ee subax walba aad ku tegi karto kana raaci karto Muqdisho.
Intaas iyo qaar kale oo aanan xusin waxay astaan u yihiin xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga ee sii xoogeysanaya.
Taas ayay muujineysaa in Madaxweynaha Turkigu, Recep Tayyip Erdoğan, uu laba sano oo isku xiga safar ku yimaado dalkeenna.
Isla sababtaas ayaa Turkigu Muqdisho uga dhisay Safaaradda ugu weyn ee uu adduunka ku leeyahay.
Xaflad dhowaan lagu qabtay Safaaradda Turkiga ayaa dadka lagu martiqaaday waxaa ka mid ahayd gabar Soomaaliyeed oo Muqdisho moogeyd muddo dheer. Xafladda markii ay ka soo laabatay waxay ii sheegtay dareenkeeda.
Waxay igu tiri, dhismaha safaaradda Turkiga quruxdiisa markii aan waxoogaa daawaday waxaan illoobay in aan Muqdisho joogo. Waxaan u fahmay, ayay tiri, farriin uu Turkigu u dirayo Soomaalida. Wuxuu ku leeyahay, “Muqdisho sidaan waad ka dhigi kartaan”.
Laba usbuuc ka hor ayay ahayd markii in ka badan boqol weriyayaal iyo blogle isugu jira ay Turkish Airlines ku martiqaadday magaaladan taariikhiga ah ee Istanbul si ay noo tusto horumarkeeda iyo sida uu Turkigu uga kabtay afgembigii dhicisoobay.
Mar aan la kulannay, Madaxa Turkish Airlines, Tamel Kotil, wuxuu noo sheegay in ay sharikaddu higsaneyso in ay sannadka 2023 ay dayaaradaheedu gaaraan 500.
Waxaa nala geeyay goobo dalxiis oo Istanbul ah waxaana meel kasta oo aan tagnay taariikhdeeda nooga warramayay dad loo tababbaray oo saddex bas oo aan la soconnay mid Ingiriis ugu fasirayay, mid Faransiis midna Carabi.
Markii uu Erdoğan booqday Muqdisho isaga oo Ra’iisal Wasaare ah, ayaa waxyaabo aan Turkiga ka akhriyay waxaa ka mid ahaa buugga qoraaga weyn ee reer Istanbul, Orhan Pamuk ee la magaca ah magaaladiisa. Wuxuu ka hadlayaa xusuustiisa magaalada iyo dagaalka joogtada ah ee dhaqanka ku saleysan ee ka dhexeeysa ilbaxnimada casriga iyo bartii yaqaannimada. Ilaa berigaas labaatameeyo jeer ayaan tegey Istanbul welina kama bogan xiisaha aan u qabo taariikhdii hore ee magaalada iyo nolsheeda maanta.
Dayaaradda saaka naga soo qaadday Muqdisho waxay galabta na keentay gegida dayaaradaha ee Ataturk ee Istanbul oo isu diyaarineysa in ay ahaato gegida saddexaad ee Yurub ka dib Heathrow oo ku taalla duleedka London iyo Charles de Gaulle oo ah Paris.
Baasabboor Soomaali ah
Safarkeyga maanta waxaan ku kulannay dhallinyaro mas’uuliyiin ah oo ka socda Hey’adaha Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya oo shaqo iyo tababbarro u tegaya dibadda.
Waxaa ka mid ah labo mas’uul oo ka kala socda Arrimaha Gudaha iyo Beeraha. Midkood wuxuu u socday Geneva oo Switzerland ah midka kalena Bangkok oo ah Thailand.
Lix sarkaal oo ka tirsan Hey’adda Socdaalka iyo Jinsiyaddu waxay tababbar u tegayeen Denmark.
Waa kuwa sawirka ka muuqda. Waa Daa'uud Cabdi Caddaawe, Mahad Cabdi, Xasan Maxamed Yusuf, Cumar Macallin Nuur, Maxamed Cabdullaahi Aden, Cabdiraxman Caadle iyo Cabdullaahi Xasan.
Waxaa isaguna sawirka ka muuqda Agaasime ka tirsan Wasaaradda Beeraha, Cabdullaahi Xasan oo safar Shaqo ku tegeya Bangkok, Thailand Iyo aniga.
Marka aad joogto Istanbul, Turkish Airlines waxay kugu xireysaa 243 magaalo oo ku yaal 116 dal oo jiha kasta kaa xiga.
Halkaas ayaan ku kala leexannay oo aan jihooyin is khilaafsan u kala duulnay aniga iyo saaxiibbadeyda hey’adaha Dowladda ka socday ee aan saaka Shaqo Qaran awgeed uga soo wada safarnay Muqdisho.
Howlwadeennada Dowladda ee aan safarka wada ahayn, midkeenna kuma socon Baasabboor aan Soomaali ahayn.
Posted by Yusuf Garaad at 19:07:00